မိုးအေးအေးမှာ စောင်လေးနဲ့ကွေးပြီးတော့ ရုပ်ရှင်ကြည့်တာထက် ပိုကောင်းနိုင်တာရှိပါတော့မလား။ • POINT
ပြတင်းပေါက်မှန်ကိုထိမှန်လာတဲ့ မိုးရေစက်သံလေးတွေကို နားထောင်ရင်းနဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ရုပ်ရှင်တွေကို ကြည့်ရှုခံစားနိုင်စေဖို့ ရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
1954မှာ ဘော်စတွန် Shutter Island Ashecliffe ဆေးရုံကနေ လွတ်မြောက်သွားတဲ့ လူနာတစ်ယောက်ကိုစုံစမ်းဖို့ ယူအက်စ်မာရှယ် Teddy Daniel ကိုတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ Teddyရဲ့ထောက်လှမ်းရေးကျွမ်းကျင်မှုတွေက အလားအလာရှိတဲ့သဲလွန်စတွေကို ပေးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ အမှုကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ်လို့ သူသံသယရှိနေတဲ့အရာတွေကို စစ်ဆေးဖို့ ဆေးရုံကခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူး။ ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းကြောင့် ကုန်းတွင်းပိုင်းနဲ့ အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်ပြီး အန္ထရာယ်ရှိတဲ့ရာဇဝတ်သားတွေ ပိုလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ ရှုတ်ထွေးမှုတွေ ပဟေဠိတွေ နဲ့ ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့သဲလွန်စတွေနဲ့အတူ Teddyက သူ့ရဲ့မှတ်ဉာဏ်တွေ သူ့ရဲ့လက်တွဲဖော်နဲ့ သူ့စိတ်သူတောင် ပြန်ပြီးတော့ သံသယဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ မြှုပ်ကွက်ပေါင်းများစွာနဲ့ စွန့်စားမှုတွေကို မိုးခြိမ်းသံတွေကြားမှာ အသည်းတအေးအေးနဲ့ ကြည့်ရှုနိုင်မဲ့ ဇာတ်လမ်းကောင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။
2. Forrest Gump(1994)
Forrest Gump ဆိုတာ စိတ်ထားကောင်းပြီး ဉာဏ်ရည်နည်းပါးတဲ့သာမန်လူတစ်ယောက်ပါ။ သူ့ရဲ့တစ်ဦးထဲသော သူငယ်ချင်း Jennyနဲ့အတူ ငယ်စဉ်ဘဝကိုဖြတ်သန်းခဲ့ပါတယ်။ သူ့အမေက သူ့ဘဝနေထိုင်မှုလမ်းကြောင်းတွေကို သင်ကြားပေးပြီးတော့ သူ့လမ်းကြောင်းသူရွေးချယ်ဖို့ထားခဲ့ပါတယ်။
Forrest ကတော့ဗီယက်နမ်စစ်တပ်မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီနေရာမှာ Dan နဲ့ Bubbaလို့ခေါ်တဲ့မိတ်ဆွေအသစ်တွေရလာခဲ့ပါတယ်။ သူက ဆုတံဆိပ်တွေကို အနိုင်ရပြီး ပင်ပေါင်ကစားရင်းနဲ့ လူတွေကို လှူဒါန်းရင်း သမ္မတနဲ့မကြာခဏတွေ့ဆုံလာရတယ်။
ဒါပေမဲ့ သူက ဘဝပျက်နေတဲ့ သူ့ရဲ့ငယ်ချစ်Jenny Curran ကိုပဲတွေးနေခဲ့ပါတယ်။ အဆုံးသတ်မှာ သူသက်သေပြချင်ခဲ့အရာက ဘယ်သူ့ကိုမဆို ချစ်နိုင်တယ်ဆိုတာပါပဲ။ ဒီ အချစ်ဟာသဇာတ်လမ်းလေးကတော့ မိုးရာသီမှာ အိမ်မှာကြည့်သင့်တဲ့ ဇာတ်လမ်းကောင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။
3. The Greatest Showman(2017)
ခြူးတစ်ပြားမှမရှိတဲ့မိဘမဲ့အမေရိကန်လူမျိုးPhineas Taylor Barnumဆိုတဲ့ကောင်လေးက စိတ်ကူးဉာဏ်ကွန့်မြူးမှုတွေအပြည့်နဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ကူးယဉ်နဲ့ အမှန်တရားရဲ့ကြားကလမ်းကြောင်းကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
တီထွင်မှုတွေကို စိတ်အားထက်သန်နေတဲ့ အောင်မြင်ချင်တဲ့အပ်ချုပ်သမားရဲ့သားလေးကပြပွဲတစ်ခုကို ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သိပ်မကြာခင်မှာပဲ သူကတော့ ထူးခြားဆန်းပြားပြီး ဘယ်တုန်းကမှ မမြင်ဖူးကြတဲ့ တင်ဆက်မှုတွေနဲ့ ဆပ်ကပ်ပြပွဲတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
တစ်ချို့ကတော့Barnumရဲ့ပြပွဲကို လူထူးဆန်းပြပွဲလို့ခေါ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီအလုပ်ကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့သူက အော်ပရာအဆိုတော် Jenny Lind ကို ပရိတ်သတ်ကြားမှာ ထုတ်ပြနိုင်ဖို့ အရာအားလုံးကိုစွန့်စားခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့သူ့ဘဝရဲ့အရေးကြီးဆုံးအရာဖြစ်တဲ့ သူ့မိသားစုကို ဆုံးရှုံးရမလိုဖြစ်သွားပါတယ်။
Barnum ကတော့ ဒါကိုလက်ခံနိုင်လောက်တဲ့ အထိစွန့်စားမှာလား။ ဂီတကို ချစ်မြတ်နိုးသူတွေအတွက် ဂီတသံစဉ်တွေကိုနားထောင်ရင်း မိုးရာသီမှာ ကြည့်သင့်တဲ့ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ပုဒ် ဖြစ်ပါတယ်။
နှစ်ပေါင်း84နှစ်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာ အသက်100ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Rose Dewitt Bukater ကတော့ သူ့မြေးမလေးတွေကို ၁၉၁၂ ဧပြီလ၁၀ ရက်နေ့ ကတိုက်တန်းနစ်လို့ခေါ်တဲ့သင်္ဘာပေါ်က သူမဘဝဇာတ်ကြောင်းလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
Rose ကသူ့အမေ Ruth Dewitt Bukater နဲ့ သူ့သတို့သားလောင်း Caledon Hockley တို့နဲ့အတူ ပထမတန်းစားအထပ်မှာစီးနင်းလိုက်ပါခဲ့ပါတယ်။ ပန်းချီဆရာ Jack Dawsonကသူ့သူငယ်ချင်းFabrizio De Rossi နဲ့အတူ ဂိမ်းကစားပွဲမှာ အနိုင်ရခဲ့တဲ့ တတိယတန်းစားလက်မှတ်နဲ့ သင်္ဘ࿿ောပေါ်ကိုရောက်နေကြပါတယ်။ သူကတော့ တိုက်တန်းနစ်ထွက်ခွာချိန်ကနေ နောက်ဆုံးခရီးစဉ် ၁၉၁၂ ဧပြီ ၁၅ရက်နေ့ မနက်၂း၂ဝမိနစ်အချိန် သေဆုံးမှုတွေအထိ အကြောင်းအရာတစ်ခုလုံးကို သေချာရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တဲ့ဒရမ်မာတွေကို ကြိုက်နှစ်သက်သူတွေအတွက် မိုးအေးအေးမှာ ကြည့်သင့်တဲ့ ဇာတ်လမ်းကောင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။
ပြတင်းပေါက်မှန်ကိုထိမှန်လာတဲ့ မိုးရေစက်သံလေးတွေကို နားထောင်ရင်းနဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ရုပ်ရှင်တွေကို ကြည့်ရှုခံစားနိုင်စေဖို့ ရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
1954မှာ ဘော်စတွန် Shutter Island Ashecliffe ဆေးရုံကနေ လွတ်မြောက်သွားတဲ့ လူနာတစ်ယောက်ကိုစုံစမ်းဖို့ ယူအက်စ်မာရှယ် Teddy Daniel ကိုတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ Teddyရဲ့ထောက်လှမ်းရေးကျွမ်းကျင်မှုတွေက အလားအလာရှိတဲ့သဲလွန်စတွေကို ပေးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ အမှုကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ်လို့ သူသံသယရှိနေတဲ့အရာတွေကို စစ်ဆေးဖို့ ဆေးရုံကခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူး။ ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းကြောင့် ကုန်းတွင်းပိုင်းနဲ့ အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်ပြီး အန္ထရာယ်ရှိတဲ့ရာဇဝတ်သားတွေ ပိုလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ ရှုတ်ထွေးမှုတွေ ပဟေဠိတွေ နဲ့ ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့သဲလွန်စတွေနဲ့အတူ Teddyက သူ့ရဲ့မှတ်ဉာဏ်တွေ သူ့ရဲ့လက်တွဲဖော်နဲ့ သူ့စိတ်သူတောင် ပြန်ပြီးတော့ သံသယဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ မြှုပ်ကွက်ပေါင်းများစွာနဲ့ စွန့်စားမှုတွေကို မိုးခြိမ်းသံတွေကြားမှာ အသည်းတအေးအေးနဲ့ ကြည့်ရှုနိုင်မဲ့ ဇာတ်လမ်းကောင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။
Forrest Gump ဆိုတာ စိတ်ထားကောင်းပြီး ဉာဏ်ရည်နည်းပါးတဲ့သာမန်လူတစ်ယောက်ပါ။ သူ့ရဲ့တစ်ဦးထဲသော သူငယ်ချင်း Jennyနဲ့အတူ ငယ်စဉ်ဘဝကိုဖြတ်သန်းခဲ့ပါတယ်။ သူ့အမေက သူ့ဘဝနေထိုင်မှုလမ်းကြောင်းတွေကို သင်ကြားပေးပြီးတော့ သူ့လမ်းကြောင်းသူရွေးချယ်ဖို့ထားခဲ့ပါတယ်။ Forrest ကတော့ဗီယက်နမ်စစ်တပ်မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီနေရာမှာ Dan နဲ့ Bubbaလို့ခေါ်တဲ့မိတ်ဆွေအသစ်တွေရလာခဲ့ပါတယ်။ သူက ဆုတံဆိပ်တွေကို အနိုင်ရပြီး ပင်ပေါင်ကစားရင်းနဲ့ လူတွေကို လှူဒါန်းရင်း သမ္မတနဲ့မကြာခဏတွေ့ဆုံလာရတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူက ဘဝပျက်နေတဲ့ သူ့ရဲ့ငယ်ချစ်Jenny Curran ကိုပဲတွေးနေခဲ့ပါတယ်။ အဆုံးသတ်မှာ သူသက်သေပြချင်ခဲ့အရာက ဘယ်သူ့ကိုမဆို ချစ်နိုင်တယ်ဆိုတာပါပဲ။ ဒီ အချစ်ဟာသဇာတ်လမ်းလေးကတော့ မိုးရာသီမှာ အိမ်မှာကြည့်သင့်တဲ့ ဇာတ်လမ်းကောင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။
ခြူးတစ်ပြားမှမရှိတဲ့မိဘမဲ့အမေရိကန်လူမျိုးPhineas Taylor Barnumဆိုတဲ့ကောင်လေးက စိတ်ကူးဉာဏ်ကွန့်မြူးမှုတွေအပြည့်နဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ကူးယဉ်နဲ့ အမှန်တရားရဲ့ကြားကလမ်းကြောင်းကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ တီထွင်မှုတွေကို စိတ်အားထက်သန်နေတဲ့ အောင်မြင်ချင်တဲ့အပ်ချုပ်သမားရဲ့သားလေးကပြပွဲတစ်ခုကို ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သိပ်မကြာခင်မှာပဲ သူကတော့ ထူးခြားဆန်းပြားပြီး ဘယ်တုန်းကမှ မမြင်ဖူးကြတဲ့ တင်ဆက်မှုတွေနဲ့ ဆပ်ကပ်ပြပွဲတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ တစ်ချို့ကတော့Barnumရဲ့ပြပွဲကို လူထူးဆန်းပြပွဲလို့ခေါ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီအလုပ်ကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့သူက အော်ပရာအဆိုတော် Jenny Lind ကို ပရိတ်သတ်ကြားမှာ ထုတ်ပြနိုင်ဖို့ အရာအားလုံးကိုစွန့်စားခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့သူ့ဘဝရဲ့အရေးကြီးဆုံးအရာဖြစ်တဲ့ သူ့မိသားစုကို ဆုံးရှုံးရမလိုဖြစ်သွားပါတယ်။ Barnum ကတော့ ဒါကိုလက်ခံနိုင်လောက်တဲ့ အထိစွန့်စားမှာလား။ ဂီတကို ချစ်မြတ်နိုးသူတွေအတွက် ဂီတသံစဉ်တွေကိုနားထောင်ရင်း မိုးရာသီမှာ ကြည့်သင့်တဲ့ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ပုဒ် ဖြစ်ပါတယ်။
နှစ်ပေါင်း84နှစ်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာ အသက်100ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Rose Dewitt Bukater ကတော့ သူ့မြေးမလေးတွေကို ၁၉၁၂ ဧပြီလ၁၀ ရက်နေ့ ကတိုက်တန်းနစ်လို့ခေါ်တဲ့သင်္ဘောပေါ်က သူမဘဝဇာတ်ကြောင်းလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ Rose ကသူ့အမေ Ruth Dewitt Bukater နဲ့ သူ့သတို့သားလောင်း Caledon Hockley တို့နဲ့အတူ ပထမတန်းစားအထပ်မှာစီးနင်းလိုက်ပါခဲ့ပါတယ်။ ပန်းချီဆရာ Jack Dawsonကသူ့သူငယ်ချင်းFabrizio De Rossi နဲ့အတူ ဂိမ်းကစားပွဲမှာ အနိုင်ရခဲ့တဲ့ တတိယတန်းစားလက်မှတ်နဲ့ သင်္ဘောပေါ်ကိုရောက်နေကြပါတယ်။ သူကတော့ တိုက်တန်းနစ်ထွက်ခွာချိန်ကနေ နောက်ဆုံးခရီးစဉ် ၁၉၁၂ ဧပြီ ၁၅ရက်နေ့ မနက်၂း၂၀မိနစ်အချိန် သေဆုံးမှုတွေအထိ အကြောင်းအရာတစ်ခုလုံးကို သေချာရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တဲ့ဒရမ်မာတွေကို ကြိုက်နှစ်သက်သူတွေအတွက် မိုးအေးအေးမှာ ကြည့်သင့်တဲ့ ဇာတ်လမ်းကောင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။
Writer & Translator : Hsu Mi San & Su Mon
World Economic Forum တွင် ပါဝင်ရန် အာဆီယံမှ အသေးစားလုပ်ငန်းရှင်များ လျှောက်ထားနိုင်